Mitemo Nezvigaro zvepaIndaneti
Aya mazwi nemitemo, pamwe chete neChinyorwa Chedu, tungamira kushandiswa kwaunoita kwewebsite yedu www.mh-chine.com (site redu / webhusaiti), ingave semushanyi kana munhu akanyorwa. Ndapota verenga mazwi aya nemitemo usati watanga kushandisa nzvimbo. Nokushandisa shanduro yedu, iwe unoratidza kuti unogamuchira aya mazwi nemitemo uye kuti unobvumirana kugara navo. Kana iwe usingabvumirani nemitemo nemamiriro aya, tapota usarega kushandisa shanduro yedu.
Kana iwe uine mibvunzo pamusoro pavo kana usingadi kuagamuchira, tapota taura neChinyorwa cheNyanzvi pa + 86-574-27766888 usati washandisa iyi webhusaiti.
Tinogona kushandura aya mazwi nemamiriro ezvinhu kana purogiramu yedu yega rega chero nguva nekuvandudza peji ino. Iwe unofanirwa kutarisa peji iyi nguva nenguva kuti uongorore aya mazwi nemamiriro ezvinhu kuti uone kuti unofara nechinangwa chipi zvacho. Kushandisa kana kuwanika pawebsite ino kunoratidza kubvuma kwemashoko nemitemo. Kana iwe usingagamuchiri mazwi aya nemitemo, chinyorwa haufaniri kuramba uchishandisa webhusaiti ino.
Mashoko pamusoro pedu
Ihofisi yedu huru iri pa #18 Ningnan North Road, Ningbo, China.
Iwe unogona kutitaurira nefoni kuri + 86-574-27766888 kana kuburikidza ne email pa .
Iwe webhusaiti iyo mitemo nemirairo iyi inoshandiswa uye izvo zvatinotarisirwa ndezvokuti www.mh-chine.com.
Kushandisa kwako kwewebsite iyi
Kuwanika kwepaiti yedu kunobvumirwa pane zvenguva pfupi, uye tinochengetedza kodzero yekutora kana kuchinja basa raunopa pane nzvimbo yedu pasina chiziviso. Hatisi kuzova nemhosva kana pane chero chikonzero chedu nzvimbo yedu isipo panguva ipi zvayo kana chero nguva ipi zvayo.
Tinogona kurega kuwana dzimwe nzvimbo dzesaiti yedu, kana nzvimbo yedu yose, kuvashandisi vakanyoresa nesu.
Iyi webhusaiti uye zvinhu zvose zviri mukati maro zvinodzivirirwa nekodzero dzemitemo, kusanganisira kodzero, uye inenge iri kwatiri kana kuti ine mvumo kwatiri kushandisa. Zvishandiso zvinosanganisira, asi hazvirevi kune zvayo, zvigadzirwa, maitiro, kutarisa, kuonekwa, maikirwo, mapikicha, mavhidhiyo nemagwaro pane webhusaiti, pamwe chete nezvimwe zvinhu zvakadai semutengo mazita, zvinyorwa, nyaya uye mamwe mavara.
Iwe haugoni kukopa, kudzoserazve, kudhindazve kana kuita zvimwe zvinhu pawebsite ino kuti zviwanike kune ani zvake kunze kwemvumo yedu mukunyora.
Iwe unogona kudhinda kana kukanda zvinhu kubva pawebsite yepaiti iyo:
• kwete zvinhu zvakashandurwa nenzira ipi zvayo;
• hapana maikirwo, mapikicha kana vhidhiyo anoshandiswa zvakasiyana nemashoko anotevera;
• zvinyorwa zvedu zvekodzero uye zvebhizimusi zvinowanika mumakopi ose uye iwe unobvuma kuti webhusaiti ino ndiyo inobva mumashoko acho; and
• munhu wauri kupa zvinhu izvi anozivikanwa nezvezvibvumirano izvi.
Iwe haufaniri kushandisa chero chikamu chezvinhu panzvimbo yedu yepaiti nekuda kwekutengesa pasina kuwana reisensi yekuita kudaro kubva kwatiri kana kuti kuburikidza isu isu kubva kune vane varairi, sezvakakodzera.
Nzvimbo yedu inobvumira kuwana uye kushandiswa kuInternet calculators kusanganisira asi kwete kuSeamwork + uye Coats Count ("App"). Mhando dzakasiyana-siyana dzinoshandisa mabasa akasiyana-siyana uye mushandisi anofanira kushandisa iyo calculator zvichienderana nemuongorori waunoda kuenzanisa. Mienzaniso yevashandi vekuverenga inosanganisira kuenzanisa kushandiswa kwehutano uye nokudaro kuongororwa kwehuwandu hwetambo uye kutendeuka kwetambo uye yeta yekuverenga maitiro.
Mukuwedzera, nzvimbo yedu inopa vashandi kuwana mazano ekudzidzisa ("Kudzidzisa Zvinhu") zvinosanganisira asi hazvirevi kudzidzisa mavhidhiyo.
Iwe unofanira kuverenga, kubvuma uye nekudaro unonamatira kune aya mazwi kuitira kuti ushandise App uye Kudzidzisa Zvinhu.
Kuti ushandise App uye / kana Kudzidzisa Zvinhu, tinokupa reisensi yekushandisa App uye Kudzidzisa Zvinhu chete nokuda kwebasa rako rebhizimisi rekuita. Ivharesi iyi ndeyomunhu uye haigoneki kwauri iwe oga uye zvakadaro haisi kushandiswa.
Iwe haungaparadzi kana kuita kuti App uye Kudzidziswa Zvinhu zviwanikwe pamusoro penhare iyo inogona kushandiswa nemichina yakawanda panguva imwe chete.
Iwe haugoni kukopa, kubvisa, kuchinja unyanzvi, kuparadzanisa, kuedza kuwana mhedzisiro yekodhi, yekugadzirisa kana kusika mabasa akawanikwa eApp uye / kana Kudzidzisa Zvinhu kana chero chikamu chayo.
Nokushandisa App uye Kudzidzisa Zvinhu, unobvuma uye unobvuma kuti:
• I-App uye / kana Kudzidzisa Zvinhu ndeyezvikonzero zvekuziva chete; and
• hatiiti mvumo kana kuti kuvimbiswa maererano nekururama kwemashoko ari muChidzidzo chekudzidzisa kana ruzivo rwakagadzirwa neApp. Kushandisa kweApp uye zvigumisiro zvinobva pazviri zvinotungamirirwa semutungamiri chete uye hazvifananidzi kupa, invoice, kukokwa kurapa kana zvakafanana.
Kana tikaronga chero dunhu rega rega panzvimbo yako kana tichiita zvatinosungirwa pasi pechibvumirano ichi, isu tose tinonyora chinangwa chedu chokuti iwe (kana kuti mushandirwi wako, zvakakodzera) uchava mutungamiriri we data uye isu tichazoita nedhepfenyuro ye data uye mune zvakadaro :
• Unobvuma uye unobvumirana kuti data iwe pachako inogona, kana zvichidiwa, kuendeswa kana kuchengetwa kunze kweEuropean Economic Area kana nyika mauri, kuitira kupa basa reApp uye zvimwe zvatinosungirwa pasi pechibvumirano ichi;
• Unofunga kuti iwe une kodzero yokutumira dheinhau rekuti iwe pachako iwe ushandise, kuitira kuti tishandise zviri pamutemo, tishandure uye tishandure dunhu rega rega maererano nesungano iyi pane yako;
• iwe unofanira kuva nechokwadi chokuti vanhu vatatu vakakodzera vakaudzwa, uye vakapa kubvuma kwavo, kushandiswa kwakadaro, kushandiswa, uye kutumirwa sezvinodiwa nemutemo wose unodzivirira kuchengetedzwa kwemashoko;
• Tichagadzirisa dunhu rega pachedu maererano nesungano iyi, mitemo nemirairo uye marongerwo ehupfumi uye chero mirayiridzo inotenderwa inopiwa newe nguva nenguva; and
• isu tose tichatora matanho akakodzera ehutano nehutano maererano nekugadziriswa kusina mvumo kana kusingabvumirwi nemutemo kwehupfumi hwemunhu kana kuti kurasikirwa kwechiitiko, kuparadzwa kana kukanganisa.
Mutoro wedu kwatiri
Aya mazwi uye mamiriro ezvinhu haafaniri kutora chikwereti chedu (kana chiripo) kwauri nokuda kwe:
• kukuvara kwepanyama kana kufa kunokonzerwa nokuregererwa kwedu;
• nenyaya ipi zvayo yaisingabvumirwe mvumo kuti isu tisabvise kana kuti tiedze kubvisa mutoro wedu.
Hatisi vimbiso yokuti webhusaiti ino ichave yakabatana nezvose kana hardware uye software yaungashandisa. Hatisi kuvimbisa kuti webhusaiti ino ichawanikwa nguva yose kana panguva ipi zvayo. Tinochengetedza kodzero yekuregera kana kuchinja iyi web site panguva chero ipi zvayo.
Hatifungi chero mhosva ipi zvayo chero ipi zvayo inokonzerwa nekushandiswa, kana kuvimba pane chero ruzivo, zvinyorwa kana nzira inenge iri pane saiti.
Hatiiti mvumo pamwe chete nesaiti, kana zvinhu zvirimo, uye hatiiti chero zvatinosungirwa kunze kweiyo inoratidzirwa mumitemo iyi nemamiriro edu uye mutemo wezvimedu.
Zvinyorwa zvinoratidzwa panzvimbo yedu yepaiti zvakapiwa pasina mvumo, mamiriro kana zvivimbiso maererano nekururama kwayo. Kusvika pamwero wakabvumirwa nemutemo, isu, dzimwe nhengo dzeboka redu remakambani nevevatatu vanobatana nesu patinonyatsodzivisa:
• mamiriro ezvinhu ose, zvivimbiso uye mamwe mazwi angangodaro airehwa nemutemo, mutemo wakazara kana mutemo wekuenzanisa.
Chero mvumo chero ipi zvayo:
• kutungamira; kana
• Kurasikirwa kwakananga kana kuenzanirana kana kukanganisa kunosangana nemupi wevashandisi maererano nesangano redu kana mukubatana nekushandiswa, kusakwanisa kushandisa, kana zviitiko zvekushandiswa kwemaiti yedu, chero mawebsite anobatanidzwa nawo uye chero zvinhu zvakatumirwa mairi, kusanganisira, pasina kukanganisa chero mutoro we:
• kurasika kwemari kana mari;
• kurasika kwebhizimisi;
• kurasikirwa kwezvikwereti kana zvibvumirano;
• kurasikirwa kwemari yakatarwa;
• kurasikirwa kwedata;
• kurasikirwa kwezvakanaka;
• kuparara kwekutarisira kana nguva yehofisi; uye nokuda kwekumwe kurasikirwa kana kukanganisa kwemhando ipi zvayo, chero ipi zvayo inokonzera uye inokonzerwa nechinokanganisa (kana kunyengedza) (kusanganisira kusava nehanya), kuputsa kwekontrakiti kana zvimwe, kunyange kana zvichioneka, zvichingoita kuti izvi zvisingatadzi kudzivisa kurasikirwa kana kuora kunzvimbo yako chaiyo kana chero ipi zvayo zvinotaurira kukanganiswa kwemari zvakananga izvo zvisingabatanidzwi nezvimwe zvezvikamu zvinotaurwa pamusoro apa. Izvi hazvibatsiri mutoro wedu wekufa kana kukuvadzwa kwega wega kubva pamusana pekuregererwa kwedu, kana mutoro wedu wekubiridzira, kunyengera kusakanganiswa kana kusavhiringidzika kune nyaya inokosha, kana chimwe chikwereti chisingagoni kubviswa kana kusagadzikana pasi pemutemo unoshanda.
Mashoko pamusoro pako uye anoshanyira panzvimbo yedu
Tinoshandisa ruzivo pamusoro pako maererano nemitemo yedu yega. Nokushandisa shanduro yedu, unobvumirana nekugadzirisa kwakadaro uye iwe unofunga kuti data yose yakapiwa newe yakarurama.
Information website iyi
Kunze kwekunge ruzivo rwewebsite ino nderekutengeserana (kusanganisira, pasina mumiririri wekodhi uye ruzivo rwekutengesa), mamwe mashoko ose aripo pawebsite ino anopiwa nokuda kwehuwandu hwemashoko uye zvinangwa chete. Apo isu tichiedza uye tinovimbisa kuti ruzivo rwuri pawebsite yedu rwakarurama uye kusvikira panguva ino, hatigone kuva nemhosva yezvimwe zvisina kururama mumashoko. Somugumisiro, haufaniri kuvimba nemashoko aya, uye tinokurudzira kuti utorezve mazano kana kutsvaka humwe hutungamiri usati watora chero chiito zvichienderana nehuwandu huri pawebsite ino. Basa redu kwamuri sekutsanangurwa pamusoro apa rinoramba risingabatsiri neizvi.
Tinogona kubatanidza kune mamwe mawebsite asiri mukati medu. Isu hatisi mhaka yewebsite idzi nenzira ipi zvayo, uye usavatsigira. Ndiro mutoro wako kutarisa mazwi uye mamiriro ehutano hwepachivande pane imwe nzvimbo yewebsite yaunoshanyira.
Iwe haungatauri kune webhusaiti ino kubva pane imwe webhusaiti kunze kwekuti iwe uchiteerera zvinotevera zvinotevera:
• hukama hunofanirwa kunge huri kune peji yewebsite pa www.mh-chine.com;
• iwe unogona kunge usingaiti chimiro kana imwe mhiri kumativi ewebsite;
• nzvimbo yaunosangana nayo inofanira kuenderana nemitemo yose yakakosha uye mitemo uye haifaniri kuva nehuwandu inogona kuonekwa seisina kunaka kana inogumbura; and
• haufaniri kureva kuti tinotsigira kana kuti tinobatanidzwa kune imwe nzvimbo yewebhu, chigadzirwa kana basa.
Zvimwe kunze kwekutsvaga kwekutengeserana kwemashoko nemamiriro ezvinhu ayo ari kukukoka kurapwa (kwete chipo), hapana chinhu pane ino webhusaiti chinotarisirwa kuve kana kusafanirwa kunzi sechipo chokupinda muukama hwepabvumirano newe kana ani zvake, kunze kweizvi mitemo nemitemo inotungamirira ukama pakati pedu maererano nekushandiswa kwako kwewebsite.
Kana iwe ukaita chibvumirano nemumwe wevatatu uyo ​​akatumidzwa kana kuti akatumidzwa pane iyi webhusaiti, ndiro doro rako kuti uone kuti iwe unofarirwa nemitemo yesungano iyoyo uye kutora mazano emutemo kana zvichidiwa.
Zvirwere zve Virus, Kutengesa uye Zvimwe Zviitiko
Iwe haufaniri kushandisa zvisina kunaka shanduro yedu nekuziva kuti unotumira mavairasi, Trojans, minye, mabhogi ekufunga kana zvimwe zvinhu izvo zvinokuvadza kana zvigadzirwa zvemagetsi. Iwe haufaniri kuedza kuwana ruzivo rwusina mvumo yepaiti yedu, iyo server iyo nzvimbo yedu yakachengetwa kana chero seva, kombiyuta kana dhesi yepamusoro yakabatanidzwa kune yedu yepaiti. Iwe haufaniri kutora nzvimbo yedu yepaiti kuburikidza nekuramba-kwe-kushanda kunyoresa kana kuparadzirwa kunoramba-kwe-kushungurudzwa kwebasa.
Nokuputsa urongwa uhwu, iwe waizoita mhosva kune pasi peKomputa Misuse Act 1990. Tichazopa chero kukanganisa kwakadaro kune avo vane kodzero dzekutonga mitemo uye isu tichashanda pamwe chete nevane masimba kuburikidza nekuzarura unhu hwako kwavari. Kana zvikaitika kukanganisa kwakadaro, kodzero yako yekushandisa sangano redu ichapera pakarepo.
Hatisi kuzova nemhosva kune kurasikirwa kana kukanganisa kunokonzerwa nekuparadzirwa kwekuregererwa kwebasa kusungirirwa, mavairasi kana zvimwe zvinhu zvekugadzirwa kwekombiki zvinogona kukanganisa kombiyuta yako, mapurogiramu epakombiyuta, dhesi kana zvimwe zvinhu zvakagadziriswa nekuda kwekushandiswa kwewebsite yedu kana kusvika pakunyorera kwezvimwe zvinhu zvakanyorwa pairi, kana pane chero webhusaiti yakabatana nayo.
Dare Rinodzora uye Simba
Kuumbwa, kuvapo, kuvaka, kushanda, kuvimbika uye zvose zvipi zvese zvemashoko aya nemamiriro ezvinhu kana chero nguva ipi zvayo yemitemo nemamiriro ezvinhu zvichatungamirirwa nemutemo weChina.
Mareji eChinese achave nesimba roga roga kugadzirisa kukakavadzana chero kupi zvako kunogona kubuda kunze kana maererano nemirairo nemitemo kana kushandiswa kwewebsite.
musha musha Categories --Threads --Zizi --Ribbon & Tape --Ropa --Vanhu - Buttons --Interlining - Tassel & Fringe / Kuchengeta - Kubatsira Zvinhu --Garments & Accessories --Sewing Machine & Parts --Fabric - Vamwe Nezvedu --MH Overview --MH Industrial --- Thread Factories --- Ribbon & Tape Factories --- Laces Factories --MH History - Tara Shows --Image Galleries --Video Album Taura nesu --Inzvimbo nzvimbo --Feedback Community --Join Us